लाइट र साउन्ड मेशिनहरू प्राप्त गर्नका कारणहरू - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
यदि तपाई धेरै मानिसहरु मध्ये एक हुनुहुन्छ जो पीडित हुनुहुन्छ अनिद्रा वा अन्य निद्रा विकारहरू, तपाईं सम्भवत समाधानको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ। दुर्भाग्यवस, त्यहाँ एक-आकारको समाधान छैन जुन सबैका लागि काम गर्दछ। यद्यपि त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन समयसँगै अनुसन्धान र प्रभावकारी हुनका लागि प्रमाणित भएका छन्। तल, हामी केही कारणहरू पार गर्दैछौं किन तपाईं हलुका र ध्वनि मेशिनहरू हुनुपर्दछ तपाईंलाई अधिक आरामदायी निद्रा प्राप्त गर्न मद्दत गर्न।
कारणहरू A प्राप्त गर्न प्रकाश र ध्वनि मेशिनहरू:
१. तपाईं विचलित गर्ने आवाज बन्द गर्न सक्षम हुनुहुनेछ
प्रकाश र ध्वनि मेसिनहरू यति प्रभावकारी हुनुको एक कारण उनीहरूको निद्रामा सुधार ल्याउन खोज्ने तिनीहरूको क्षमताले तपाईंलाई तपाईंको वातावरण भित्र विचलित गर्ने आवाजलाई अवरुद्ध गर्न मद्दत गर्ने तिनीहरूको क्षमतासँग गर्नुपर्दछ। यो विशेष गरी सहयोगी छ यदि तपाईंसँग रूममेटहरू छन् वा यदि तपाईं व्यस्त शहरको बीचमा अवस्थित हुनुहुन्छ भने पनि। इष्टतम निद्रा प्राप्त गर्न, तपाईले एक अनुकूल वातावरण सृजना गर्नु पर्छ जुन यसको लागि अनुकूल छ। त्यसकारण, तपाइँ निश्चय गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँ निदाउन र अबाधित राख्न मद्दतको लागि तपाइँ साउन्ड मेशिन जस्तै केहि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
२. तपाईका विचारहरू रोक्नुहोस्
मुख्य कारण मध्ये एक धेरै मानिसहरु लाई सुत्न गाह्रो समय छ को लागी उनीहरु संग निरन्तर कुरा सोच्न को लागी जब तिनीहरू सुत्न खोज्दै छन्। यदि तपाइँ लाग्छ कि तपाइँ लगातार स्कूल असाइनमेन्ट, कार्य असाइनमेन्ट, वा अरू केहिको बारेमा चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको विचारहरू रोक्ने उपायहरू फेला पार्न चाहानुहुन्छ। यसको उत्तम तरिका भनेको केहि प्रकारको आवाज बजाएर हो। यो किन सेतो आवाज यति धेरै प्रभावी छ किनकि यसले तपाईंको दिमागमा संकेत दिन सक्छ कि यो सबै चीज बन्द गर्ने समय हो। चाँडै नै तपाईंको मस्तिष्क सेतो आवाजको साथ निदाउन बानी हुन्छ, यो तपाईं को लागी दोस्रो प्रकृति हुनेछ।
Aking. जागा रहनबाट आफूलाई जोगाउनुहोस्
एक समस्या जुन धेरै व्यक्तिले चल्न सक्दछन् तीमध्ये एक रातभरि ब्यूँझनु। यदि तपाईं सजिलै निदाइरहनुभएको छ तर तपाईंले रातभरि जागा रहिरहनुभएको पाउनुभयो भने, तपाईं यसलाई समाधान गर्न चाहानुहुन्छ। त्यसो गर्न उत्तम तरिका भनेको रातभरि हल्लाइरहेको आवाजमा तपाईंको ध्यान विचलित गर्नबाट र तपाईंलाई ब्यूँझनबाट रोक्नको लागि सेतो आवाज बजाउनु हो। यी आवाजले तपाईंलाई जगाउन अनुमति दिएर, तपाईं अन्त्य गर्न सक्नुहुनेछ यो धेरै गाह्रो भयो निदाउन यो एक पटक हुन्छ।
समग्रमा, त्यहाँ आफुमा लाइट र साउन्ड मेशीन खोज्नु पर्ने हर कारण छ यदि तपाईलाई या त निदाउन वा निदाउनमा कठिनाइ भइरहेको छ भने। यो धेरै लाभदायक साबित हुन सक्छ यदि तपाईं कोही हुनुहुन्छ जसलाई कि गर्न केहि अलि बढी मद्दतको आवश्यकता छ। मन जिउँदो केहि उत्तम मेशिनहरू बनाउँदछ जसले तपाईंलाई सुत्न मात्र होइन तर सम्पूर्ण रातभरि सुत्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ।